Madaxii Guddiga UN-ka ee baaraya Xasuuqii Gaza oo iscasilay - Wargane News
Home Somali News Madaxii Guddiga UN-ka ee baaraya Xasuuqii Gaza oo iscasilay
Guddoomiyihii guddiga Qaramada Midoobay u saartay baarista xasuuqii Isra’iil ka geysatay Marinka Gaza ayaa xilka iska casilay kadib markii ay dhaliiceyn uga timid xukuumada Isra’iil.
Qareenka xilka isaga degay William Schabas oo u dhashay dalka Canada ayaa hogaaminayey guddiga baaritaanka ku wada xasuuqii Gaza ka dhacay duqeyntii isra’iil u geystay bartamihii sanadkii tagay 2014.
Isra’iil ayaa ku eedaysay Mr.Schabas inuu si gaar ah naceyb ugu hayo maamulka Isra’iil iyagoo daliil taas uga dhigay inuu hada kahor uu talo dhanka sharciga ah uu siiyey xukuumada Falastiin.
Schabas ayaa sheegay inuu yahay khabiir dhex dhexaad ah isla markaana baaritaanka lagu waday xasuuqii Gaza aysan wax xariir ah lalaheyn aragtidiisa gaarka ah, wuxuuna intaasi raaciyey inuu hada kahor dowlada Falastiin uu talo kasiiyey dhanka sharciga oo ku aadan Maxkamada Caalamiga, taasina ay qeyb ka tahay talooyina ay soo weydiistaan dowladaha Caalamka.
Balse maamulka Yuhuuda ayaa ku eedeeyey khabiirkan hadalo uu hada kahor saxaafada siiyey oo ay kamid ahayd inuu yiri Benjemin Netenyahu waa in lasoo taago Maxkamada Caalamiga ah, hadalkan oo ay Isra’iil ku doodey inay tusaale u tahay inuusan khabiirkan dhex dhexaad ahayn.
Xukuumada Benjemin Netenyahu ee Isra’iil ayaa durbaanka u tumeysa in la joojiyo baaritaan caalami ah oo lagu sameeyo danbiyadii dagaal ee ka dhacay Gaza, duqeyntii sanadkii lasoo dhaafay Isra’iil la beegsatay Marinka Gaza ayaa lagu xasuuqay in ka badan 2000 qof oo rayid ah.
Maaha markii ugu horeysay oo Isra’iil iyo xulafadeeda ay cadaadis saaraan khubarada caalamiga ah ee baaritaanada ku sameeya danbiyada Isra’iil gasho.